Wamkelekile kwixesha elibonakalayo-iGeofumadas
Ikhaya/ezintsha/Wamkelekile kwixesha lokubonisa
Wamkelekile kwixesha lokubonisa
Kwi-1998, i-Kodak yabasebenzi be-170,000 kwaye bathengisa i-85% yazo zonke iifoto zephepha kwihlabathi.
Kwiminyaka embalwa nje, imodeli yakhe yezo shishino yanyamalala, yamthabatha.
Yintoni eyenzekayo kwi-Kodak iya kwenzeka kumashishini amaninzi kwiminyaka elandelayo ye-10-kwaye abantu abaninzi abayiqondi.
Ngaba ucinga kwi-1998 ukuba iminyaka engama-3 ingasayi kuthatha iifoto ephepheni kwakhona?
Nangona kunjalo, iikhamera zedijithali zaqanjwa ngo-1975. Njengazo zonke iiteknoloji ezibonakalisayo, babedanile ixesha elide ngaphambi kokuba babe ngaphezulu kwaye babeyeyona nto iphambili kwiminyaka embalwa.
Ngoku kuya kudlula nge-Intelligence Intelligence, impilo, iimoto zombane ezizimeleyo, imfundo, ukushicilelwa kwe-3D, ezolimo kunye nemisebenzi.
Wamkelekile kwi-Fourth Industrial Revolution!
Isofthiwe iya kutshintshwa kwamashishini amveli kwii-5-10 iminyaka ezayo.
I-Uber isisitoretye ​​nje, asiyiyo nayiphi na imoto, kwaye ngoku ke yinkampani enkulu yeetekisi kwihlabathi. I-Airbnb ngoku yeyona nkampani enkulu kwihotele kwihlabathi nangona ingenayo ipropati.
Intelligence Intelligence: Iikhomputha ziya kuba ngcono ngakumbi ekuqondeni ihlabathi. Kulo nyaka, ikhomputha ibetha iGood Player phambili kwihlabathi (umdlalo waseTshayina ogqithiseleyo kune-chess), iminyaka eyi-10 ngaphambili ngaphambili.
E-USA amagosa amancinci akasakwazi ukufumana umsebenzi ngenxa ye-IBM Watson, unokufumana iingcebiso zomthetho (ngemiba engundoqo) ngemizuzwana, ngokuchanekileyo kwe-90% ngokuthelekiswa nokuchaneka kwe-70% yabantu. Ngoko ukuba ufunda umthetho, kha wuleza. Kuza kubakho abameli be-90% abangaphantsi kwexesha
I-Watson Health isele ibanceda abahlengikazi baxilonge umdlavuza, kunye namaxesha e-4 ngokuchanekileyo kunonesi babantu. I-Facebook ngoku i-software yolwazi ekwazi ukuqonda ubuso obubhetele kunabantu. Kwi-2030, iikhomputha ziya kuba zintle kunabantu.
Iimoto ezizimeleyo: iimoto zokuqala ezizimelayo ziya kuvela kwi-2018. Kwi-2020, lonke ishishini liza kuba neengxaki. Awufuni ukuba nemoto kwakhona. Uya kubiza imoto ngefowuni yakho, iya kubonakala apho ukhona kwaye iya kukuthabatha ukuya kwindawo oya kuyo. Awuyi kuwubeka ipaki, uza kuhlawula kuphela umgama ohambahamba kwaye uza kusebenza xa uhamba. Abantwana bethu abayi kuyidinga ilayisenisi yokuqhuba kwaye abayi kuze kubekho imoto. Izixeko ziya kutshintsha kuba siya kufuna i-90% -95% iinqwelo eziphantsi. Siyakwazi ukuguqula ibhishi lokupaka kwiipaki. I-1.2 izigidi zabantu ehlabathini zifa minyaka yonke ngenxa yeengozi zemoto. Ngoku sinomngcipheko kwikhilomitha nganye ye-100,000; ngeemoto ezizimeleyo eziya kutshintsha kwengozi kwiikhilomitha ezili-10 zeekhilomitha. Oku kuza kusindisa isigidimi ngasinye
Uninzi lweenkampani zikarhulumente. Iinkampani zemveli zorhwebo zisebenzisa indlela yokuziphendukela kwemvelo kwaye zenza imoto engcono ngelixa iinkampani zeteknoloji (iTesla, Goole, Apple) zineendlela zokuguqula nokuvelisa iikhomputha ngevili. Ndathetha kunye ne-VW kunye ne-Audi njineli kwaye bayothuka kakhulu nguTesla.
Iinkampani zomshuwalense ziya kuba neengxaki ezimbi kuba ngaphandle kweengozi, i-inshorensi iya kuba ngamaxesha angama-100 angabizi. Imodeli yakho yomshuwalense wemoto iya kubonakala.
Ibhishithi yendawo yokuhlala iya kutshintsha. Kungenxa yokuba ukuba unako ukusebenza xa uhamba, abantu baya kudlulela emadolobheni ukuze baphile '
Awuyi kufuna amajelo amaninzi ukuba abantu abancinci baneemoto, ngoko ukuhlala kwizixeko kungabonakalisa ngakumbi kuba abantu bathanda ukuba nabanye abantu. Oku akuyi kuguquka.
Iimoto zombane ziya kuba ziqhelekileyo kwi-2020. Amadolophu aya kuba mnandi ngenxa yokuba yonke imoto iya kuba yombane. Umbane uya kuba uhlambulukile kwaye ungabizi: ukuveliswa kwamandla alanga kuye kwinqaba engabonakaliyo yeminyaka ye-30, kodwa ngoku ungabona igalelo. Kunyaka ophelileyo, amandla amakhulu elanga afakwe ngaphezu kwamandla ombane. Ixabiso lamandla elanga liya kuwa kakhulu kangangokuba zonke iinkampani zamalahle ziza kubakho kwi-2025.
Ngombane ongezantsi ufikeleleka kwaye amanzi angabizi ngokucinywa. Khawucinge ukuba kwenzeka ntoni ukuba wonk 'ubani angaba namanzi acocekileyo njengoko ayefuna, phantse ngaphandle kweendleko.
Impilo: Ixabiso le-Tricorder X liya kubhengezwa kulo nyaka. Kuya kuba neenkampani eziza kudala idilesi yonyango (ebizwa ngokuba yi Star Star Trek Tricorder) edibanisa kunye nefowuni yakho, eyenza ukukhangela i-retina yakho, izakuthatha iisampulu zegazi lakho nokuphefumula kwakho. Emva koko i-54 iya kuhlalutya abamakishi be-biological abaza kuchonga phantse nasiphi na isifo. Kuya kuba kubi, ngako-ke kwiminyaka ethile wonke umntu kule planethi uza kuba nokufikelela kwiyeza zonyango, phantse mahhala.
Ukushicilelwa kwe-3D: Ixabiso lomshicileli oncinci liwe kwi-US $ 18,000 ukuya kwi-US $ 400 kwiminyaka eyi-10. Ngelo xesha, kwaba ngamaxesha e-100 ngokukhawuleza. Zonke iinkampani ezinkulu zeembadada zaqala ukushicilela izicathulo kwi-3D. Ingxenye zeenqwelo zendiza zanyatheliswa okwangoku kwi-3D kumaziko aphakamileyo aseburhulumenteni. Isikhululo sesikhala ngoku sinomshicileli ophelisa isidingo esikhulu seendawo ezazisetyenziswa ngaphambili
Ekupheleni konyaka, ii-smartphones ezitsha ziya kuba nethuba lokuskena kwi-3D. Emva koko unokwazi ukukhangela unyawo lwakho kwi-3D uze uprinte isihlangu esifanelekileyo endlwini yakho. E-China, sele ushicilelwe kwi-3D isakhiwo seeflethi ze-6. Kwi-2027, i-20% yento yonke eveliswayo iya kuprintwa kwi-3D.
Amathuba oshishino: Ukuba ucinga nge-niche yemarike ofuna ukuthatha inxaxheba kuyo, zibuze: "kwixesha elizayo, ucinga ukuba siya kuba nayo?" Ukuba impendulo nguewe, ungayenza njani ngokukhawuleza? Ukuba ayidibanisi nefowuni yakho, yilibale umbono. Yaye nayiphi na ingcamango eyenzelwe ukuphumelela kule nkulungwane yama-20 ngokuqinisekileyo iya kusilela kule nkulungwane yama-21.
UYobhi: I-70% -80% yemisebenzi iya kulahleka kwiminyaka elandelayo ye-20. Kuya kuba nemisebenzi emitsha emininzi, kodwa kusacacanga ukuba kuya kuba nokwanele imisebenzi emitsha kwesoxesha elifutshane
Ezolimo: Kuya kubakho i-robot yeedola ezili-100 kwixesha elizayo. Abalimi abakumazwe ehlabathi lesithathu baya kukwazi ukuba ngabaphathi bamasimi abo endaweni yokusebenza yonke imihla emasimini abo. I-Hydroponics iya kufuna amanzi amancinci kakhulu. Iinyama zenkomo zokuqala eziveliswe kwiipetri izitya ziyafumaneka ngoku kwaye ziya kuba zincinci kunezo ziveliswa yinkomo enye ngo-2018. Okwangoku, i-30% yawo wonke umhlaba wezolimo isetyenziselwa iinkomo. Khawufane ucinge ukuba awusayifuni loo ndawo. Kukho iinkampani ezininzi zokuqalisa eziza kubonelela ngeprotein yezinambuzane kungekudala. Zineprotheyini eninzi kunenyama. Iya kumakishwa "njengomnye umthombo weprotheyini" kuba uninzi lwabantu lusala umbono wokutya izinambuzane.
Ukuhlaziywa kwemithombo yezityalo kunye nezityalo kuya kwenziwa kwi-satellites kunye ne-drones kunye nokulawulwa kwezinambuzane, isondlo kunye nezifo ziya kuveliswa ngendlela ezinzileyo kwikhompyutha.
Imfundo: kwisizukulwana esinye ngaphezulu, iikhampasi ziya kuncitshiswa zibe ziilebhu zovavanyo kunye nophando kunye nophuhliso lwamatyala kunye nobuchule, njengomyalelo we-Intanethi kunye nevidiyo. Iimvavanyo nazo ziya kwenziwa ekude kwaye ziya kukhangela ukuba umntu "uyayazi" okanye uyakopa okanye unkqaya.
Wonke umntu ongenalo lobugcisa okanye imfundo ekhethekileyo uya kuba yikhoboka lezemali, ngaphandle kwamalungelo apheleleyo wobummi.
Kukho i-app ebizwa ngokuba yi-“Moodies” esele ikwazile ukukuxelela ukuba unjani na umoya okuwo. Kude kube ngu-2020 kuya kubakho usetyenziso olunokuxelela ukuba uyaxoka ngembonakalo yobuso bakho. Yiba nomfanekiso-ngqondweni wengxoxo yezopolitiko ebonisa xa bethetha inyaniso okanye bexoka.
Iibhitcoins ziya kusebenza ngokuqhelekileyo kulo nyaka kwaye zinokuba zigcinwe ngeengqekembe.
Iphepha lePhepha liya kutshabalala kwizizukulwana ze-2 kwaye yonke intengiso iya kuba yikhompyutha.
- Okwangoku, ubomi bomyinge bwandisa iinyanga ze-3 ngonyaka. Iminyaka emine edlulileyo, ubomi obuphakathi kweminyaka eyi-79, ngoku i-80 iminyaka. Ukunyuka ngokwayo kukhula kwaye i-2036 kuya kuba ngumnyaka omnye wokwanda ngonyaka. Ngoko siphila ixesha elide, mhlawumbi ngaphezu kwe100 ...
Ekuphela kwento enokuthintela le ndaleko kukutshatyalaliswa kohlanga lwabantu zizidenge ezimbalwa ezinamandla nezingafundanga.”
Amanqaku avela kumntu owenziwe ngethuba lenkonyuli yeYunivesithi yeNgqungquthela eyenziwa eMesse Berlin, eJamani ngo-Ephreli we-2017
Faka imephu kwi-Excel - fumana ulungelelwaniso lwejografi - ulungelelwaniso lwe-UTM
Isitoreji se-intanethi yezithuthi zokugcina izixhobo
I-Digital Twin-Philosophy yenguqulelo entsha yedijithali
Iinkqubo zeBentley zibhengeza ukufunyanwa kwe-SPIDA
I-AEC elandelayo kunye ne-SPAR 3D Inkqubo yeNkomfa ye-2019
Into nganye entsha yayinabalandeli bayo abathi, xa besetyenziswa, batshintsha amashishini ahlukeneyo. I-PC itshintshe indlela esiqhuba ngayo ...
Ikhosi ye-PTC CREO yeParametric Course-Uyilo, uhlalutyo kunye nokulinganisa (1/3)
I-CREO sisisombululo se-3D CAD esikunceda ukukhawulezisa ukuveliswa kwemveliso ukuze wenze ngcono ...